हेर्नुस २०७६ मंसिर २ गते सोमबारको राशिफल – सजल सन्देश
हेर्नुस २०७६ मंसिर २ गते सोमबारको राशिफल
By Sajal sandesh	 On२ मंसिर २०७६, सोमबार ०१:३५
आज २०७६ मंसिर २ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
यी हुन् आज मन्त्री बन्नसक्ने सम्भावित नयाँ नाम